DAAWO: sida ay u dabaal-degeen Richarlison iyo qoyskiisa kaddib markii laacibka looga yeeray xulka qaranka Brazil – Gool FM
DAAWO: sida ay u dabaal-degeen Richarlison iyo qoyskiisa kaddib markii laacibka looga yeeray xulka qaranka Brazil
(Brazil) 18 Maajo 2019. Macallinka xulka qaranka Brazil ee Tite ayaa shalay ku dhawaaqay xiddigaha bisha dambe uga qeyb galaya Copa America 2019, waxaana laga waayey magacyo waa weyn.
Vinicius Junior, Fabinho iyo Lucas Moura ayaa laga tagay oo aan ka mid ahayn liiska xiddigaha xulka qaranka Brazil uga qeyb galaya Copa America 2019 ee shalay lagu dhawaaqay.
Laakiin waxaa shaxda xulka qaranka Brazil looga yeeray shalay ciyaaryahanka kooxda Everton ee Richarlison.
Weeraryahankan Richarlison ayaa shaashada horteeda fadhiyey markii macallin Tite uu ku dhawaaqayey liiska xiddigaha xulka qaranka Brazil uga qeyb galaya Copa America, waxaana uu la daawanayey qoyskiisa, balse markii magaciisa lagu dhawaaqay gabi ahaan goobta ayaa isbedeshay.
Sawaxan, sacab iyo marxabeyn ayaa ka dhacay goobta, isagoo aad ugu fasaxanaa in lagu daro xulka Brazil ayuuna laabta geliyey qaar ka mid ah qoyskiisa.
Haddaba halkaan hoose ka daawo sida ay u dabaal-degeen Richarlison iyo qoyskiisa kaddib markii laacibka looga yeeray xulka qaranka Brazil:-
🇧🇷 @richarlison97‘s family when they heard he’d been named in Brazil’s Copa America squad ❤️
(🎥 via @gazetaonline) pic.twitter.com/cJ2fTidcnV
Shaxda xulka qaranka Brazil ee shalay lagu dhawaaqay oo dhammaysatiran:-
Liverpool oo kula dagaalameysa Man United iyo Arsenal, xiddig xilli ciyaareedkan wacdaro ka dhigay Champions League